I-Cozy Double Room emaphandleni amahle - I-Airbnb
I-Cozy Double Room emaphandleni amahle
Doagh, Northern Ireland, i-United Kingdom
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Angeline
Sihlala endaweni enhle yasemakhaya ngaphandle nje kweDoagh Village, indawo yethu ihlala endaweni ecishe ibe yihektare lezingadi ezibunjwe umhlabathi ezibheke emaphandleni. Siseduze nemizila emikhulu, imizuzu eyi-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza iBelfast International, imizuzu engama-20 ukusuka echwebeni laseLarne, imizuzu engama-45 ukusuka oGwini oluseNyakatho eScenic, imizuzu eyi-15 ukusuka enkabeni yeDolobha laseBelfast kanye neDolobha laseDublin ngaphansi kwamahora angu-2.5.
Singabantu abathanda ukuxoxa nabantu abathanda ukuxoxa nabantu futhi akukho esikuthandayo kunokuhlala phansi nebhodwe letiye sixoxe ngendawo yakithi enhle. Sijabule kakhulu ukunikeza iseluleko ngezindawo ezithakazelisayo nezikhangayo zasendaweni. Izinhlobonhlobo ezinhle zama-pubs, izindawo zokudlela, izitolo nezitolo ezinkulu ziseduze.
Sikhulele kule ndawo futhi bekuyikhaya impilo yethu yonke. Kunokuthula, kunokuthula futhi umsindo kuphela owezilwane zasendle 😊
Sizohlinzeka ngesidlo sasekuseni sezwekazi njalo ekuseni. Impahla yokuwasha iyatholakala uma icelwa ngemali encane. Ukusetshenziswa kwekhishi kungahlelwa ngokucela izivakashi ezizohlala isikhathi eside.
Siyaqonda futhi siyahlonipha ukuthi abantu bayathanda ukuba nemfihlo yabo kodwa sizobe sikhona uma unemibuzo noma izicelo.
Sizohlinzeka ngesidlo sasekuseni sezwekazi njalo ekuseni. Impahla yokuwasha iyatholakala uma icelwa ngemali encane. Ukusetshenziswa kwekhishi kungahlelwa ngokucela izivakashi ezizo…
Hlola ezinye izinketho ezise- Doagh namaphethelo